होमपेज / शुक्रबार / नक्कली 'मिस नेपाल'
नक्कली 'मिस नेपाल'	16 May 2013 बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
मिस नेपालमा भिड्ने उमेर अभिनेत्री शुभेच्छा थापाको होइन, उनकी छोरीको भएको छ। तर, १६ वर्षे छोरीकी आमा शुभेच्छा अचेल मिस नेपालमा भिडिरहेकी छिन्। उसो त आफूलाई मेन्टेन गरेकै कारण जवान छोरीकी आमा भनेर पत्याउन पनि मुश्किल पर्छ। त्यसैमाथि 'नक्कली मिस नेपाल'मा भिड्ने भएपछि उमेरको हदबन्दी हुने कुरै भएन। आफैँले निर्माण गरेको फिल्म 'दी मिस नेपाल'मा मिस नेपाल बन्न शुभेच्छा कसिएकी हुन्। तर, उनलाई नक्कली मिस नेपाल पनि बन्न नदिन मिस नेपालको सक्कली आयोजक हिडेन ट्रेजरले दबाब दिएको छ। फिल्मको कथालाई कुनै हालतमा नचुहाउने योजनासहित सुटिङ भइरहेको फिल्म 'दी मिस नेपाल'मा साँच्चीकैको मिस नेपाल बन्दा चुकाउनुपर्ने मूल्य समेटिन सक्ने डर भयो होला आयोजकलाई। नत्र किन डराउनु? उनले गर्न चाहेको र हुन चाहेको नक्कली मिस नेपाल हो क्यारे! Tweet Leaveacomment Message *
दुरुस्तै फोटोकपीकेही साताअघि रिलिज भएको हिन्दी फिल्म 'नशा' धेरैलाई थाहा होला। फिल्म नहेरे पनि पुनम पाण्डेका हर्कत कसले बिर्सिनसक्छ र? तस्बिर हेरेपछि सबैलाई लाग्नसक्छ, यस्तो कहीँ देख्या हो। हो, त्यही फिल्मको...	जाडोमा 'हट' बन्न खोज्दाकाठमाडौँमा त्यो पनि साँझपख ज्याकेटले पनि जाडो थाम्न मुश्किल परिरहेको काठमाडौँवासीलाई अवगत छ। यस्तो जाडोमा पनि आफूलाई 'हट' देखाउनुपर्ने बाध्यता छ, हिरोइनहरूलाई। न्यानो पहिरन लगाएर पूरा ज्यान ढाक्दा राम्रो नदेखिने...	नेपाली फिल्मको कथा गतिलो हुनुपर्‍यो : रामकुमारी झाँक्रीके पाउनुभयो राजनीतिमा लागेर?
समाजलाई चिनेँ। सम्बन्धहरू बनाएँ। धेरै चिजहरू बदल्ने अभियानमा सरिक हुन पाएँ।
कति भयो राजनीतिमा लाग्नुभएको?
भयो २३ वर्ष जति।
अझै कति लुटिने हो?मलेसिया जान कामदारले ८० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ। तर, म्यानपावर कम्पनीले १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म उठाइरहेका छन्। खाडी मुलुक जान सरकारले ७० हजार रुपैयाँ लागत तोकेको छ, तर कामदार...	एमाओवादी थप कमजोरएकीकृत नेकपा माओवादीभित्र फेरि एकपटक नेतृत्व हस्तान्तरण र विकासको प्रसंग उठेको छ। ०४५ सालमा भएको सेक्टर काण्डपछि मोहन वैद्य किरण कारबाहीमा परेर पार्टी नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा...	दसैँका दश सुरचाडपर्वलक्षित गीत थुप्रै छन्। नेपालीहरूको ठूलो चाड दसैँलाई पनि गीतमा उतारिएको छ। दसैँ आउँदाको उत्साह, पिर, मिलन र विछोडका भावलाई धेरैले गाएका छन्। अचेल त दसैँको शुभकामना पनि गीतमार्फत नै...	करकापमा नांगिने होथुप्रै फिल्ममा स्कर्ट लगाएर अभिनय गरेकी अभिनेत्री झरना थापाले 'ओम' लगायत केही फिल्ममा बेडसिनसमेत दिएकी छिन्। बेडसिन दिनेबित्तिकै हिरोइनको आलोचना सुरु हुन्छ भने कतिपय हिरोइनले त्यही आलोचनालाई पनि चर्चामा आउने...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा गरेको छ। एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माओवादी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपाल,...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...